Q’eswachaka, ilay tetezana Inca hany sisa mampifandray ny vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Q'eswachaka, ilay tetezana Inca hany sisa mampifandray ny vondrom-piarahamonina
Voadika ny 02 Jolay 2018 5:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Ελληνικά, Italiano, Deutsch, Português, polski, македонски, नेपाली, Română , 日本語, Español
Sary avy amin'ny Rutahsa Adventures www.rutahsa.com – navoaka nahazoana alalana avy amin'i Leonard G. tao amin'ny Wikipedia (CC BY-SA 1.0).
Nandritra ny ampira Inca, fantatra ihany koa amin'ny hoe Tawantinsuyo, namolavola ny tambajotra lehiben'ny tetezana sy ny lalana mba hahafahan'ny faritra lehibe mifandray ny Peroviana fahiny.
Tamin'ireo tetezana rehetra ireo izay nisy tamin'izany fotoana izany, ny Q’eswachaka na Queshuachaca (ara-bakiteny hoe “tetezana tady” amin'ny teny Quechua) no hany sisa tavela amin'izao fotoana, izay hiampitana ny lalana kely eo amin'ny Reniranon'i Apurímac ao amin'ny faritanin'i Canas, any amin'ny faritra atsimon'i Cusco.
Tetezana Inca farany , Queshuachaca.
Vita avy amin'ny ichu ny Q'eswachaka, ahitra maniry any amin'ny faritra avo Andeana. Nandritra ny 500 taona mahery, namelona hatrany io fomba amam-panao avy amin'ny teknolojia tranainy io ireo mponina ao an-toerana. Isan-taona rehefa amin'ny volana Jona, miara-mivory ary manao lanonana araka ny fombafomba ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra ao Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua ary Ccollana Quehue mba hanamboarana indray ny tetezana miaraka amin'ireo fitaovana sy teknika tranainy izay efa nampiasaina tamin'ny vanim-potoan'ny Incas.
Tamin'ny taona 2013, noraketin'ny UNESCO ao amin'ny Lisitry ny Vakoka Ara-kolontsain'ny Olombelona ny fahaizana, ny talenta ary ny fombafomba mifandraika amin'ny fanavaozana ny tetezana Q'eswachaka isan-taona. Araka ity famariparitana ity:
Mahita izany ho fitaovana hanamafisana ny fifandraisana ara-tsosialin'izy ireo fa tsy ho toy ny làlana hifamezivezena fotsiny ihany [Ny vondrom-piarahamonina]. Heverina ho fanehoana masina ny fifamatoran'ny vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny natiora, ny fomba amam-panao ary ny tantara ny tetezana […]
Ny fanavaozana ny tetezana sy ny famelomana indray ny fomban-drazana
Maharitra telo andro ny fombafomba amin'ny fanavaozana indray ny tetezana, ary samy manana ny fandaharam-potoany efa voaomana tsara ny andro tsirairay .
Manomboka amin'ny fanomezana fanatitra ho an'ilay mpiaro Apu ny andro voalohany. Angonina ary havadika ho tady madinika ny akora fototra hanaovana tetezana. Ny tolakandro, mitondra ny fitaovana rehetra, mamadika ny tady madinika ho lasa tady matevina ny vondrom-piarahamonina – efatra hanaovana lalan'ny tetezana, ary roa hanaovana arofanina.
Hitarina miampita ny renirano avy eo ny tady lehibe. Amin'ny andro faharoa, atao mahazo ny andaniny sy ny ankilany ireo, ary avela hianjera ny tady taloha.
Amin'ny andro fahatelo, mandrandrana ny tetezana miaraka mba hanomezana izany lalana handehanana sy hanamafisana ny arofanina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana izany amin'ny fotony ny chakaruhac ( injeniera Inca) .
Ary amin'ny andro farany, sokafana indray ny tetezana miaraka amin'ny mozika sy dihy mampiavaka ilay faritra.
Miampita an'i Queshuachaca, tetezana Inca farany any Pero.
Navoakan'ny mpisera iray tao amin'ny Twitter ny lahatsary iray avy amin'i AJ+ izay mampiseho ny fomba andrandranana ny tetezana isan-taona:
Nandritra ny taonjato maro, narandrana indray ny tetezana mihantona Q'eswachaka. Azontsika fantarina avy amin'ny fananganana miaraka ny hatsaran-tarehy Inca.
Hitantsika ao amin'ny Instagram ihany koa ny sarin'ireo mpisera izay niampita ny tetezana: